ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ-(၂၁) ရာစု ပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင? - Yangon Media Group
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ-(၂၁) ရာစု ပင်လုံ တတိယ အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ နောက်ဆုံးသီတင်းပတ်တွင် ကျင်းပရန် ယနေ့ ပြုလုပ်သော ၆ ကြိမ်မြောက် JICM အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၆ ကြိမ်မြောက် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်ခိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူ စာချုပ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (JICM)တွင် ၎င်းဆုံးဖြတ်ချက် အပါအဝင်ဆုံးဖြတ်ချက် ၇ ရပ် ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ထိုဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ (၁) တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်NCA အကောင်အထည်ဖော်မှု ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာကိုအတည်ပြုရန်၊(၂) RCSS-SSA ၏ အမျိုးသား အဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို ဇန်နဝါရီလအတွင်း ရှမ်းပြည်နယ် လင်းခေးမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရန်၊ (၃) ALP ၏ အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးပွဲ ကျင်းပခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန်၊ (၄) ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ် အကောင် အထည်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် NCA အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ (၅) ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင်လုံ၊ တတိယအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ နောက်ဆုံးသီတင်းပတ်တွင် ကျင်းပရန်၊ (၆) ၇ ကြိမ်မြောက် JICM အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ နောက်ဆုံးသီတင်းပတ်တွင် ကျင်းပရန်၊ (၇) ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် အချက်အချို့မှအပ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာမူဘောင်၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် ToR များနှင့် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်း ဆိုင်ရာလုပ်ထုံလုပ်နည်း Standard Operating Procedure-SOP များကို အတည်ပြုခြင်း စသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၆ ကြိမ်မြောက် JICM အစည်းအဝေးသို့အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန ဥက္ကဌ ၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အတူ ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး စိုးဝင်း ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့(PPST) ခေါင်းဆောင် KNU ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးဆေးဖိုးတို့ လည်း ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
၉ ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၅၀၀ တန် အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဖွင့်ပွဲတွင် ဆုမဲပေါင်း ၁၂၃,၂၀၆ ဆု အတွက် ငွေကျပ် ??
၆၆(ဃ)ဖြင့် တရားစွဲခံထားရသည့် Myanmar Now အယ်ဒီတာချုပ်၏ တတိယမြောက်ရှေ့နေ တရားရုံးတွင် ပါဝါတင်